OTU ESI ESI NA TWITTER: IDOZI NSOGBU NBANYE - TWITTER - 2019
Weghachite ohere akaụntụ Twitter
Nsogbu na ịbanye na Twitter na-akpata ọ bụghị naanị site na njirimara nke onye ọrụ (aha njirimara, paswọọdụ ma ọ bụ niile ọnụ). Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ nkwụsị ọrụ maọbụ akaụntụ hacking.
Anyị ga-atụle nhọrọ niile maka ihe mgbochi ikike na ụzọ maka mkpochapụ zuru oke.
Ebumnuche 1: Aha njirimara echefu
Dị ka ị maara, a na-emepe ụzọ Twitter ka ịkọ aha njirimara na paswọọdụ na akaụntụ onye ọrụ ahụ. Nbanye, n'aka nke ya, bụ aha njirimara ma ọ bụ adreesị ozi-e ma ọ bụ nọmba ekwentị mkpokọta jikọtara na akaụntụ ahụ. Ọfọn, paswọọdụ, n'ezie, enweghị ihe ọ bụla nwere ike dochie.
Ya mere, ọ bụrụ na ị chefuru aha njirimara gị mgbe ị na-abanye na ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike iji nchịkọta nọmba gị / adreesị ozi-e na paswọọdụ kama.
Ya mere, ịnwere ike ịbanye na akaụntụ gị ma site na peeji nke Twitter ma ọ bụ jiri ụdị nyocha ọzọ.
N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ọrụ ahụ jụrụ ajụ ịnakwere adreesị ozi-e ị banyere, o yikarịrị ka e mehiere mgbe ịde ya. Dezie ya ma gbalịa ịbanye ọzọ.
Ebumnuche 2: Adreesị Email adighi
Ọ dị mfe ikwu na n'ọnọdụ a, ngwọta yiri nke ahụ dị n'elu. Ma naanị otu mmegharị: kama adreesị ozi-e na ubi nbanye, ịkwesịrị iji aha njirimara gị ma ọ bụ nọmba ekwentị mkpokọta ejikọtara na akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na enwekwu nsogbu na ikike, ị ga-eji paswọọdụ ntọala nrụpụta. Nke a ga-enye gị ohere ịnweta ntụziaka maka otu esi eweghachi akaụntụ na akaụntụ gị n'otu igbe ozi ahụ dị na mbụ ejikọtara na akaụntụ Twitter gị.
Na ihe mbụ ebe a ka a gwara anyị ka anyị kọwapụta ụfọdụ data gbasara onwe gị, iji chọpụta akaụntụ ịchọrọ iweghachi.
Ka e were ya na anyị na-echeta aha njirimara. Tinye ya n'ime otu ụdị na ibe ma pịa bọtịnụ ahụ. "Chọọ".
Ya mere, a na-enweta akaụntụ kwekọrọ na usoro.
N'ihi ya, ọrụ ahụ maara adreesị ozi-e anyị jikọtara na akaụntụ a. Ugbu a anyị nwere ike ịmalite iziga akwụkwọ ozi na njikọ iji tọgharịa paswọọdụ. Ya mere, anyị na-agbanye "Nọgidenụ n'ihu".
Lelee ozi gbasara iziga ozi nke oma ma gaa na igbe igbe.
Ọzọ anyị na-ahụ ozi na isiokwu. "Ntọala ntinye okwu nyocha" site na Twitter. Ọ bụ ihe dị anyị mkpa.
Ọ bụrụ na Igbe mbata akwụkwọ ozi ahụ abụghị, o yikarịrị ka ọ dabara n'ụdị Spam ma ọ bụ igbe ozi igbe ọzọ.
Gaa na ọdịnaya nke ozi. Ihe niile anyị chọrọ bụ ịgbanye bọtịnụ ahụ. "Gbanwee Paswọdu".
Ugbu a, anyị aghaghị ịmepụta paswọọdụ ọhụrụ iji kpuchie akaụntụ Twitter gị.
Anyị na-ejikọta ọnụ ọgụgụ dị mgbagwoju anya, na-abanye ya ugboro abụọ na mpaghara kwesịrị ekwesị ma pịa bọtịnụ ahụ "Zipu".
Onye obula Anyị gbanwere paswọọdụ, ịnweta "akaụntụ" ahụ weghachite. Iji malite ọrụ ozugbo, pịa njikọ ahụ "Gaa Twitter".
Ebumnuche 3: enweghi ohere iji nweta nọmba ekwentị ejiri
Ọ bụrụ na enweghị nọmba ekwentị mkpado na akaụntụ gị ma ọ bụ na ọ bụrụ na ọ furu efu (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ furu efu), ị nwere ike weghachite ohere na akaụntụ gị site na isoro ntuziaka dị n'elu.
Ekem ke ama enyịme ke "mbụk" emi edi nditịbe ma ọ bụ ịgbanwe nọmba mobile.
Iji mee nke a, pịa na avatar anyị nso bọtịnụ ahụ Tweet, na na menu adaala, họrọ ihe "Ntọala na Nche".
Mgbe ahụ na ibe ntọala akaụntụ gaa na taabụ "Ekwentị". N'ebe a, ọ bụrụ na ọnweghị ọnụọgụgụ na akaụntụ ahụ, a ga-akpali gị ịgbakwunye ya.
Iji mee nke a, na ndepụta ndọpụta, họrọ mba anyị ma tinye ozugbo nọmba ekwentị mkpanaaka anyị chọrọ ijikọta na "akaụntụ" ahụ.
Nke a na-esote usoro nke a na-eme iji gosipụta eziokwu nke nọmba anyị gosiri.
Naanị tinye koodu nkwenye anyị nwetara na ubi kwesịrị ekwesị wee pịa "Jikọọ ekwentị".
Ọ bụrụ na ịnataghị SMS na nọmba ọnụ ọgụgụ n'ime nkeji ole na ole, ịnwere ike ịmalite izipụ ozi ahụ. Iji mee nke a, binyere njikọ ahụ. "Rịọ koodu ọhụrụ nkwenye".
Dika ihe a na-eme, anyi huru akwukwo "A na-arụ ọrụ ekwentị gị".
Nke a pụtara na ugbu a, anyị nwere ike iji nọmba ekwentị mkpokọta jikọtara maka ikikere na ọrụ ahụ, nakwa iji weghachite ya.
Ebumnuche 4: "ozi abanye na"
Mgbe ị na-agbalị ịbanye na ọrụ microblogging Twitter, ị nwere ike ịnweta ozi njehie mgbe ụfọdụ, nke ọdịnaya ya dị nnọọ mfe ma n'otu oge ahụ ọ bụghị ihe ọmụma - "E mechibidoro nbanye!"
N'okwu a, ihe ngwọta maka nsogbu ahụ dị mfe dịka o kwere mee - naanị cheretụ ntakịrị. Eziokwu ahụ bụ na njehie dị otú a bụ nbudata nke nkwụsịtụ nke akụkọ ahụ, nke a na-emekarị na-akpaghasị ya otu awa mgbe ọ gasịrị.
N'okwu a, ndị mmepe na-ekwusi ike na mgbe ha nwesịrị ozi dị otú ahụ, ọ bụghị izipu paswọọdụ ugboro ugboro na-agbanwe arịrịọ. Nke a nwere ike ime ka mmụba na oge ịgbachi akaụntụ.
Ebumnuche nke 5
Ọ bụrụ na e nwere ihe mere ị ga-eji kwenye na ejirila akaụntụ Twitter gị ma ọ bụ onye na-awakpo ya, ihe mbụ, n'ezie, bụ iji tọgharịa paswọọdụ. Otu esi eme nke a, anyị akọwaworị n'elu.
Ọ bụrụ na enweghi ike ịnweta ikike, naanị nhọrọ ziri ezi bụ ịkpọtụrụ ọrụ nkwado ọrụ.
Iji mee nke a, na ibe maka ịmepụta arịrịọ na Ntanetị Ọrụ Ntaneti anyị na-ahụ ìgwè "Akaụntụ"ebe pịa njikọ "Aka na akụkọ".
Na-esote, dee aha "akaụntụ" weghaara ma pịa bọtịnụ ahụ "Chọọ".
Ugbu a, n'ụdị kwesịrị ekwesị, anyị na-egosi adreesị ozi-e ugbu a maka nkwurịta okwu na kọwaa nsogbu ahụ mepụtara (nke, ma, ọ bụ nhọrọ).
Kwenye na anyi abughi robot - pịa igbe nlele ReCAPTCHA - ma pịa bọtịnụ "Zipu".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ na-anọgide na-echere nzaghachi nke ọrụ nkwado ahụ, nke nwere ike ịbụ na Bekee. O kwesiri iburu n'uche na ajuju ajuju ajuju banyere ihe ndi ozo banyere akwukwo ndi ozo banyere Twitter na ngwa ngwa, na nsogbu di na nkwado nke nkwado nke oru a aghaghi ibili.
Ọzọkwa, ebe ị nwetaghachiri akaụntụ na akaụntụ ha, ọ bara uru itinye ihe iji jide n'aka nchedo ya. Ndị ahụ bụ:
Ịmepụta paswọọdụ kachasị mgbagwoju anya, a ga-ebelata ohere nke nhọrọ nke nhọrọ.
Inye nchedo dị mma maka igbe akwụkwọ ozi gị, n'ihi na ọ bụ ịnweta ya na-emepe ọnụ ụzọ maka ndị na-awakpo ọtụtụ n'ime ihe ndekọ weebụ gị.
Na-achịkwa omume nke ngwa ndị ọzọ nwere ohere ọ bụla na akaụntụ Twitter gị.
Ya mere, isi nsogbu na ịbanye n'ime akaụntụ Twitter, anyị atụlewo ya. Ihe niile na-abụghị nke a, na-ezo aka kama ịda mbà na ọrụ ahụ, nke a na-ahụtụbeghị nke ọma. Ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu yiri nke ahụ mgbe ị na-abanye na Twitter, ị ga-akpọtụrụ ọrụ nkwado nke akụ.